घरमा वाइफाइ नचलेपछि प्रयोगकर्ताहरूद्वारा वर्ल्डलिङ्कको कार्यालय घेराउ! - Onlinenews Global
June 28, 2021 laxmiLeaveaComment on घरमा वाइफाइ नचलेपछि प्रयोगकर्ताहरूद्वारा वर्ल्डलिङ्कको कार्यालय घेराउ!
कोटेश्वरकी पार्वती खड्का भन्छिन्, ‘यो वल्डलिङ्कको नम्बरमा फोनको घण्टी जान पाएको छैन मोबाइलमा ब्यालेन्स काटिन सुरु हुन्छ। पछि फोन व्यस्त मात्र भन्छ। नेटको भन्दा फोनबाट बढी पैसा उठाउँछन् जस्तो लाग्छ यिनीहरूले।’
विद्यार्थीहरूले भर्चुअल कक्षा लिइरहेका हुन्छन् भने घरमा बसेर इन्टरनेटबाट काम गर्नेहरूलाई झन् समस्या हुने गरेको छ। यस्तो बेला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी जिम्मेवार बन्नुपर्ने प्रयोगकर्ताहरू बताउँछन्।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
जयसिंह धामीको परिवारलाई १० लाख सहयोग गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
यसरी ४१ ओटा विभिन्न जनावर तथा चराचुरुङ्गीको आवाज निकालेर भाइरल थिइन् सन्तोषी सुब्बा(भिडियो हेर्नुहोस्)